Ross Barkley ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Home STARS EUROPEAN Ross Barkley ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Desambra 19, 2017
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Rossi'. Ny Ross Barkley Childhood Story plus Ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainany dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisana amin'ny fiainana ary ny maro momba ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony midadasika ny afomanga, saingy vitsy no mihevitra fa ny biografia an'i Ross Barkley izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Ross Barkley dia teraka tamin'ny andro 5th of December 1993 tany Liverpool, Royaume-Uni.
Sagittarius no teraka. Teraka tamin'ny rain'ny Nizeriana izy, Peter Effanga izay injenieran'ny fiara sy britanika britanika, Diane Barkley (mpiandry trano).
Ross, fa tsy namaly i Effanga no nifidy ny hamaly ny anaran'ny reniny hoe "Barkley'noho ny fifandraisana saro-pady nifanaovany tamin'ny rainy Nizeriana tamin'izy nitombo.
Ross dia nanomboka nilalao baolina kitra noho ny ezaky ny dadany izay mpifindra monina, ka nahatonga azy ho mpandova ilay hany tompon-daka handray ny onjam-peo tena izy. Toy izany koa ny amin'ireo ray aman-dreny mpifindra monina any Eorôpa. Ry ray aman-dreny Leroy Sane, Mesut Ozil, Christian Benteke sns.
Tamin'ny alalan'i Peter Effanga, dadany dia niaraka i Ross Everton nanomboka nilalao baolina tamin'ny taona 11 taona. Izy dia nandroso tamin'ny alalan'ny Evertonian rafitra tanora. Ankoatra ny fanoratana lohateny amin'ny maha-zatovo an'i Ross dia fantany fa manana hormone mitombo izy sy ny génie izay nahatonga azy hihalehibe noho ireo namany sy ireo mpanohitra tahaka ny sary etsy ambany.
Ross Barkley dia nihevitra ny GIANT nandritra ny fahazazany
Romelu Lukaku dia nanatri-maso ny aretina mitombo ihany koa. Raha ny marina, teo amin'ny 15, i Ross dia efa nifangaro tamin'ny pejy eo ambany 18. Izany dia noho ny fanorenana ny fatany. Imbetsaka izy no nitarika ekipa tanora nandritra ny fandresena lehibe ary nandresy fifaninanana lehibe tahaka ny Cup Echo izay natolotr'i Liverpool teo aloha Rafa Benitez.
Rafa manolotra ny loka trophy ho an'i Ross
I Barkley dia nantenaina fa hanangana ny Toffees azy voalohany tany am-piandohan'ny vanim-potoanan'ny 2010-2011 fa tsy ela taorian'ny nanohanany ny ratra mafy teo amin'ny tongotra. Nifandona tamin'ny Liverpool izy Andre Wisdom raha adika amin'ny Anglisy Under-19's.
Tamin'ny volana desambra 2011, fotoana fohy taorian'ny namadihana ny 18, dia nanoratra ny tetikasa vaovao maharitra izy Everton. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Ny Super Glacier Ross Barkley dia fantatra fa manana ny fandriampahalemana indrindra, azo ampiharina, manan-tsaina, tena ary tena izy tovolahy tompon-andraikitra, Wag sy ny vehivavy tokony ho izy. Tsy olon-kafa izy fa tsy Zoe Riozzi.
Angamba nangataka anao ..., nahoana izahay no nidera azy be loatra? .... Ny antony dia ireto manaraka ireto;
Zoe Riozzi dia olom-bolo-nidina. Ny endrik'izy ireo dia maneho izany rehetra izany. Tia manao akanjom-pilaminana Parka izy noho ny fanamafisany ny asany sy ny kiraro tsy misy fangarony fa tsy mpangalatra toy ny mpilalao baolina sy ny sipany.
Lasa fantatra amin'ny fiainany maneran-tany izy rehefa nanomboka niaraka tamin'ny Ross nandritra ny fahazazany izy.
Izy no tompon'andraikitra ary nohajaina noho ny fihazonana ny tongotr'i Barkley amin'ny tany. Manana fiarovana matanjaka amin'ny lehilahy Angletera izy. Tsy toy ny ankamaroan'ny football any WAGs, Zoe dia tsy liana amin'ny fitaovana toy ny vola sy laza. Raha ny marina, dia £ 9 isaky ny mpampianatra sekolin-jatovo isan'ora izy.
Ny fomba fiainany dia mitovy amin'izany Wayne Rooneyny vadin'i Coleen Rooney izay neken'ny fitazonana ny Anglisy hanaraka azy indray mandeha. Zoe dia lalina noho Coleen raha ampitahaina amin'ny toetra maha-olona azy.
Ny mpivady, samy mitovy taona, dia avy amin'ny faritra iray ao Liverpool ary ny namana dia milaza fa ny fifandraisan'izy ireo dia 'mandeha mafy'. Raha ny marina, ny fifandraisan'izy ireo dia lasa avy amin'ny tanjaka-tanjaka.
Na dia eo aza ny sangodim-panarenana vao haingana sy ny £ 40,000 isan-kerinandro, izay nipoitra tsikelikely, Zoe dia nisafidy ny hitondra fiara tsy mendrika indrindra ho an'ny fiara iray izay hitondra fiara. Raha tokony ampiasain'ny Bentleys sy Range Rovers ny ankamaroan'ny fanosihosena, dia nisafidy ny ho ao ambadiky ny kodiarana Fiat 500 i Miss Zoe Riozzi. Izy no mitondra fiara ambany Fiat500 izay mitentina £ 4,000.
Zoe Riozzi ny fiainana an-tany
Samy tia ny hitsidika ny Buckingham Palace sy Dubai ny mpankafy. Fialan-tsasatry ny fialan-tsasatra ao amin'ny twitter-n'i Zoe dia mampiseho azy ireo eo am-pisakafoanana amin'ny alàlan'ny famaranana masoandro. Tsara tarehy izy eto.
Zoe Riozzi mandany fialantsasatra amin'ny Ross
Ross Barkley Famintinana ny tantaram-pitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana -toetra
Ross dia Sagittarius hatramin'ny nahaterahany. Manana an'ity toetra ity izy momba ny toetrany zodiac.
Ny tanjon'i Ross Barkley: Fitiavana, fahafoizan-tena ary fahatsapana vazivazy.
Ny fahalemen'i Ross Barkley: Ny fampanantenana izay mihoatra noho izay afaka, dia tsy manam-paharetana, dia hilaza zavatra na inona na inona tsy mitovy.
Inona no tian'i Ross Barkley: Fahalalahana, fitsangatsanganana, filozofia ary ivelan'ny trano.
Inona no tsy tian'i Ross Barkley: Ny olona clingy, ny tebiteby sy ny teoria.
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold Biography Facts -The Great Punch
Ny sarimihetsika mampihoron-koditra dia niseho tamin'ny fampisehoana an'i Ross Barkley izay nandondona tao anaty baomba mandainga. Nofefeny teo amin'ny sisin'ny tarehiny izy talohan'ny nianjera tamin'ny tany.
Nilaza ny mpisolovava an'i Barkley fa niharam-boina izy "Fanafihana tsy nampoizin'ny vahiny nanatona azy".
Ny fanafihana dia tao amin'ny baran'ny barika Santa Chupitos tao afovoan-tanànan'i Liverpool tamin'ny fiandohan'ny ora maraina. Tonga ora vitsy taorian'ny nahazoan'ny ekipany fandresena 4-2 tao an-tanànan'i Leicester tao Goodison Park.
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Eny, tena gaga toa anao izany, marina izany. Ross Niger dia nizeriana.
Na ny raibeny dia Nizeriana.
tahaka Dele Alli, Dia nolavin'i Barkley ny hilalao an'i Nizeria. Nahazo alalana hiverina ho an'ny Super Eagles izy talohan'ny nanaovany ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana ho an'ny ekipa ambony ao Angletera ao 2013.
Talohan'ny nandrosoany an'i Moldavia tamin'ny fifaninanana World Cup, nilaza i Ross fa i Nizeria dia iray amin'ireo firenena mety ho nisolo tena an'i Angletera. Samy mbola monina any Liverpool avokoa ny rainy, Ingenieur Peter Effanga sy ny reniny, Diane Barkley.
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Afo fanavakavahana
Raha mbola fotsy ianao, moa ve misy heloka bevava ny ray aman-dreninao na ny razamben'i Afrika?
Everton indray mandeha dia noraràna ny Sun tabloid tao amin'ny trano iray momba ny lahatsoratra momba an'i Ross Barkley izay nanamarika ny tsikera "Mpanavakavaka".
mpanoratra an-gazety Kelvin MacKenzie Ampitahao amin'ny Barkley, izay manana raibeny avy any Nizeria, amin'ny "Gorilla ao amin'ny vala" ary nilaza fa ny hany olona hafa tao Liverpool tamin'ny fidiram-bolany dia mpivarotra zava-mahadomelina.
Navoaka ny lahatsoratra "Ity no antony mahatonga azy ireo hiasa amin'ny Ross" miaraka amin'ny sarin'i Barkley sy gorilla.
Rehefa nahita an'io gazetiboky io i Joe Anderson, ben'ny tanànan'i Liverpool, dia nitatitra izany tamin'ny polisy sy ny Fikambanana tsy miankina tsy miankina izay niantso azy io "Fanavakavahana sy fanolanana". Ny mpitory ny Sun News UK nilaza tao amin'ny fanambarana iray fa MacKenzie "Dia nihantona tamin'ny vokatra teo no eo".
Ross Barkley Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Chelsea Snub
Ross dia namita ny fifantenana ny Stamford Bridge saingy nanao fanatanjahan-tena mahavariana tamin'ny fiatrehana ny vanim-potoana nahafatesana ny Chelsea FC.
Antonio Conte dia niverina tamin'ny fanapahan-kevitr'I Ross Barkley mba handefa hetsika ho an'i Chelsea taorian'ny filazan'ny tatitra fa nanalavitra ny fifanarahana noho ny tsy fahafahan'izy ireo nitory ny fikambanana Anglisy. Antonio Conte amin'ny finday.
Nitatitra ny tatitra Antonio Conte's dia nesorina ny findainy na nodidiana mba tsy hiteny amin'ny 23 taona.
raha Count dia nolavina izany, dia nikasa hanao hadalàna kely tao Barkley izy noho ny tsy nanaovany sonia. Amin'ny teniny ...
'Raha misy mpilalao manana faniriana goavana ho an'ny klioba lehibe, dia manisy famantarana izy. Indraindray dia zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny miresaka amin'ny mpilalao alohan'ny famantarana. Indraindray tsy izany. Nanasonia mpilalao maromaro aho fa tsy niresaka tamin'izy ireo. "
Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Ross Barkley momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!
Ny tantaran'ny Eden Hazard Childhood Plus untold
Febroary 3, 2017